33 Kwapera nguva yakati, Jakobho akatarira, akaona Isau achiuya aine varume mazana mana.+ Naizvozvo akakamurira vana kuna Reya naRakeri nevashandikadzi vaviri,+ 2 akaisa vashandikadzi vacho nevana vavo pamberi,+ Reya nevana vake vachivatevera,+ Rakeri naJosefa vari shure kwavo.+ 3 Iye akaenda mberi kwavo akakotama kanomwe kusvikira asvika pedyo nomukoma wake.+ 4 Isau akamhanya kuti asangane naye,+ akamumbundira,+ akawira pamutsipa wake, akamutsvoda, vakasvimha misodzi. 5 Akabva atarira akaona vakadzi nevana akati: “Ava vauinavo ndivanaani?” iye akati: “Vana avo Mwari akanzwira nyasha mushandi wenyu navo.”+ 6 Vashandikadzi vacho vakabva vauya mberi, ivo nevana vavo, vakakotama; 7 Reya akauyawo mberi, nevana vake, vakakotama, Josefa akazouyawo mberi, naRakeri, vakakotama.+ 8 Zvino akati: “Unorevei neboka rose iri revafambi vandasangana navo?”+ Iye akati: “Kuti ndinzwirwe nyasha nashe wangu.”+ 9 Isau akati: “Ndine zvizhinji kwazvo, munun’una wangu.+ Zvako ngazvirambe zviri zvako.” 10 Asi Jakobho akati: “Aiwa, ndapota. Kana mandinzwira nyasha,+ ibvai matora chipo changu paruoko rwangu, nokuti maererano nechinangwa chechipo chacho ndaona chiso chenyu sokunge ndiri kuona chiso chaMwari pakuti mandigamuchira nomufaro.+ 11 Ndapota, torai chipo chinoratidza kuonga kwangu chamaunzirwa,+ nokuti Mwari akandinzwira nyasha uye nokuti ndine zvinhu zvose.”+ Akaramba achimumanikidza, zvokuti akachitora.+ 12 Gare gare akati: “Ngatibvei pano tiende, rega ndikutungamirire.” 13 Asi akati kwaari: “Ishe wangu anoziva kuti vana havana simba uye ndine makwai nemombe zviri kuyamwisa zvandiri kutarisira,+ vakazvimhanyisa kwezuva rimwe, boka rose rezvipfuwo richabva rafa.+ 14 Ndapota, ishe wangu ngaaende mberi kwomushandi wake, asi regai ini ndipfuurire norwendo zvishoma nezvishoma maererano nokufamba kwezvipfuwo+ zviri pamberi pangu uye maererano nokufamba kwevana+ kusvikira ndasvika kunashe wangu kuSeiri.”+ 15 Isau akabva ati: “Ndapota, rega ndikupe vamwe vanhu vandinavo.” Iye akati: “Muchaitirei izvi? Ishe wangu ngaandinzwire nyasha.”+ 16 Naizvozvo pazuva iroro Isau akatendeuka akadzokera kuSeiri. 17 Jakobho akabva ipapo akaenda kuSukoti,+ akazvivakira imba, akaitira boka rake rezvipfuwo matumba.+ Ndokusaka akatumidza nzvimbo yacho kuti Sukoti. 18 Kwapera nguva yakati, Jakobho akasvika akachengeteka uye zvakanaka kuguta reShekemu,+ riri munyika yeKenani,+ paakanga achibva kuPadhani-aramu;+ uye akadzika musasa pakatarisana neguta racho. 19 Akabva awana chikamu chenyika maakadzika tende rake paruoko rwevanakomana vaHamori baba vaShekemu, nokuda kwezana remari.+ 20 Akazomisa atari ipapo, akaitumidza kuti Mwari, iye Mwari waIsraeri.+